Uyini umsebenzi wokudala? Ukudala umsebenzi ayo, Hack, wabhala isosha esihlatshelelwayo, eyakhiwa melody ... eziningi ukuthi akunakubangelwa lo mqondo.
Ingane ekwenzayo ngato tonkhe tikhatsi zokuphila kwakhe
Empeleni, noma yimuphi umsebenzi kungenziwa ngokuthi yokudala, uma umuntu ezenza ke ngokuxhuma ukhexile. lokusungula Wezingane kuyinto ngezinye izikhathi e izenzo kakhulu elula ukuthi abadala kubonakale eziwubala noma ngisho nelimazayo.
Nakhu izinyane uRips iphepha nemiyalezo uyahlakaza izingcezwana phansi. Kungase kubonakale ukuthi nje nobuxhwanguxhwangu. Nokho, ingane ingase ibe ematasa emsebenzini obalulekile akwenzayo eqhwa awa phansi elele.
Spoiled isithombe sangemuva - kuphuma Kutama ziveza okuthile omkhulukazi, ezinkulu kungahlali eshidini. amakhethini ezimangelengele ingase futhi ihlanganise umqondo yokudala - ingane ukukera nomchilo phezu isidina kwesihenqo okuyisidina.
Life - uyindaba okumele kubonwe
Xhuma umcabango, ukwenza noma yini, udinga ukufundisa izingane kusukela ebuntwaneni. Ngisho umsebenzi onjalo eyisicefe njengoba rewinding ohlobo, waphenduka kalula ibe yokudala, uma nihlabela "nakuWinder" thumela glomeruli izidalwa ukuthi ugijime isitsha, ukukhuluma, ukuxabana, wabuyisana ophilayo - ngamafuphi, ukuphila "klubochnoy" ukuphila kwabo. Bese umsebenzi isidina kakade futhi yayithakazelisa, futhi zokudala.
Izandla zakhe rewound intambo ngaphansi iminwe kamama noma kagogo iphenduke into emangalisayo, kudalwa okuzothatha izinyane abathintekayo.
Izinhlobo nemisebenzi yokudala
Yingakho imisebenzi okukhulunywe ngokuqondile designated izigaba kunzima. Kodwa uma sicabangela lokusungula izingane ngqo, kufanele ukwaba ezinye izigaba sasivumela olunzulu. Lawa ongakhetha semisebenzi lapho izingane zingaba ekuvumbululeni. Ngokwesibonelo, singakwazi ukuhlukanisa lezi izinhlobo zomsebenzi, njenge:
Lihlanganisa izifundo izicelo okuklama, udini, ekukhiqizeni ngamanani amancane. L. S. Vygotsky uhlongoza ukufaka nabo ezobuciko. Kodwa cwaninga umsebenzi wokudala - lena umsebenzi ngokwesayensi. Kuyinto ofanele kakhulu ngaphansi esigabeni lokusungula ngamazwi.
izingane Musical zizalwa
I touch lokuqala art yomuntu nakanjani unina. Phela, kuyinto ngokushesha ngemva kokuzalwa komntwana iqala ukucula kuye lullaby. Eyokuqala Ukwethula "Aga" - kungaba ngomzamo lokucula leyo ayesezibekelele umphefumulo share usana nezwe imizwa yabo?
Kodwa pipsqueak safinyelela amabhodwe sidilize ngesasasa ladle ngaye. Kuphi kakhulu ukulimaza ingane? It is ikakhulukazi bakwatiswe abadala, okuwenza umsindo ikhanda? Cha, yebo.
omdala ohlakaniphile uyaqaphela ukuthi ingane efeza umsebenzi obalulekile zokudala - ngezandla zakhe, ifunda kukhishwe imisindo ehlukene, eqhathanisa kubo, unezela e indlela ethile yokuma. Siqala uwubonisa ngobubhimbi, kodwa bheka uzama kanjani!
Futhi uma ngokuzayo esikhundleni pan ukuba simnike ithamborini, nobuxhaka noma onxantathu? Kungaba kanye ingane ukuhlela i-orchestra encane yangempela futhi zidlala tune emangalisayo.
Umdwebo - touch of lokusungula
Futhi ngisho izingane zithande ukudweba. Lolu hlobo lomsebenzi, nazo isiqala bahlanganyele ingane isencane. Futhi uma kid ngenkathi bedla ngamabomu dirtying jam etafuleni, zibhebhetheka umunwe ichibi juice, okusanhlamvu bazokwenza lokho nakuBafana ekhanda lakhe izingubo, kungenzeka wazama yena indima umculi.
Izimo zethu zihluke kakhulu tot amancane inganikelwa ngalesi yobudala, umunwe upende, okuyinto bahlanza kalula off nge ifenisha, ukusebenzelana kwezandla nokunyakaza wanelisekile kalula nale nokuqukethwe kusukela izingubo Upholstery. A lodonga egumbini lezingane kungcono esikhundleni ezishibhile, lokho kungaba into edabukisayo hhayi ukushintsha ngonyaka.
Izingane abaye ngobuqili igcinwe cam ipensela, ukunikela iphepha futhi ubonise ukuthi wayemkhulu kangakanani lo "Wand magic" uyakwazi ukwenza enkundleni ezimhlophe, izinto ezimangalisayo.
Futhi ake ingane yokuqala nje Okokudwebela uyibhala ngepeniseli noma ibhulashi ubeka izindawo shapeless. Okubalulekile kulo msebenzi - hhayi yi kodwa umgomo ukuthi usetha uqobo.
Bemidwebo yobuciko emakilasini enkulisa
Ekilasini izingane akuyona nje draw. Benza umsebenzi wokudala sihloko okunikezwa uthisha. Kungaba landscape noma namanje ukuphila, lelandzisako imidwebo kokuveza abantu, izilwane, inganekwane nezinhlamvu, noma zasendlini.
izingane abathandwayo sika imisebenzi yokudala, lapho thishela akasinqumeli umsebenzi Kusobala - ukupenda nobe esifundvweni lesitsite, futhi linikeza self-asungula umqondo isithombe kwelilodwa noma amanye, ububanzi sihloko ngokwanele. Zingase zibekwe kwengqikithi ethi "! Asifuni impi", "Kungani sidinga ukuthobela imithetho yomgwaqo?" "Yondla ubunjalo, ngoba - ikhaya lethu" Futhi abanye!.
"Isikhunta" futhi "ukudala" izwi kaningi lahlotshaniswa
Ukuze ezobuciko, njengoba kushiwo ngenhla, futhi zihlanganisa sculpting. Izingane usebenzisa plasticine, ubumba, polymer mass, inhlama okunosawoti, zobumba abandayo uzama sculpt yilokho abakubonayo, like, lokho ababekufunda lacocelwe wona nobe lafundvwe omdala okutshela fantasy. Lo msebenzi wobuciko izingane ongamtshela okuningi emhlabeni kwawo kwangaphakathi. Yingakho kubaluleke kangaka ukunikeza izingane ithuba uyihlanganise hhayi kuphela ngesihloko esifanayo, kodwa ipulani sakhe siqu.
lokusungula Ibuthelelo izingane
Zonke ngaphawula ukuthi ngezinye izikhathi izingane kukhona abakwenza ndawonye. Lapha e-Sandbox bakha edolobheni noma umgwaqo ekhonkiwe, kusukela bakha iqhwa nqaba. Lo msebenzi hhayi kuphela ikuvumela ikghonakalo yokudala, kodwa ifundisa bebambisene, ewusizo ngakho kubo nakamuva ekuphileni kwabo esizayo.
Kufanele ngokunenzuzo le, futhi ngezinjongo zokufundisa ekilasini. Ngokwesibonelo, isicelo ungathola omkhulu "Bird Idolobha" uma guys yedwa anamatheliswe ephepheni elaqheshulwa izinyoni iphepha, ziyaphuma ezidlekeni zazo, izimbali, amaqabunga egatsheni lesihlahla noma otshanini ngaphansi kwaso! Lona umsebenzi omkhulu okudala ngokuhlanganyela. Izandla zakhe wenza futhi wamisa phezu kodonga panel kuyoba uyaziqhenya izingane, abazali babo nothisha.
Exhibition of yezandla zezingane
Ngo ingane ukunakekelwa izikhungo ngokuvamile emncintiswaneni imisebenzi yokudala endabeni ethile. Kungaba ahlukene kakhulu. Ngokwesibonelo, "Emncintiswaneni yezandla ezenziwe ngezinto zemvelo," "ukwakha kusuka inganekwane nezinhlamvu imifino", "amakhadibhodi Magic", "Yini ingenziwa amabhodlela epulasitiki?" Futhi abanye.
Izingane kanye intsha bafunde ngenjongo zakhiwe edayisa izinto izifundo, izingoma engasetshenziswa ekhaya noma njengendlela umhlobiso ekhaya. Kubalulekile ukubeka umsebenzi ngaphambi izingane zibonisa izibonelo kakade eyenziwe umuntu usebenza, ukuze sicacise ukuthi ukhetho kuyigugu ngaphezu elenziwe ngecebo lakhe siqu, hhayi siwulingise.
Into ezithakazelisayo wukuthi umsebenzi wokudala abafundi ngokuvamile kukhona ezingalindelekile ngakho ezinqumweni, ngamunye nokunye masterfully ababulawa ukuthi abadala ngezinye izikhathi abakholelwa ukuthi zabhalwa umfundi.
Umhlaba izingane zifunde ngokusebenzisa play
Zonke izingane ziyakuthanda kulingisa. Ukubamba iqhaza kuzo, badlala wonke ukusebenza ngokurhaba. Kodwa uthisha uhlakaniphile ngeke akuvumele lolu hlobo umsebenzi wokudala ukuba zizenzakalele ngenhlanhla.
Ngo zamaqembu ezingane athuthukile uhlelo esikhethekile umsebenzi wokudala kule ndawo. kumele kukhonjiswe Kukhona izinhloso ukuthi uthisha ihlose ukufeza izinhloso ngokusebenzisa umdlalo, amakhono namandla iqhaza, bona baqinise noma ufunde e inkambo, amasu methodical.
Ngokwesibonelo, ngo-plan kuhlanganisiwe zokudala play "esitolo". Uthisha ubeka lezi zinhloso:
Ukujwayelaniswa nge umsebenzi abadala abasebenza esitolo.
ukuthuthukiswa kwamakhono zokuxhumana yamasiko ezijwayelekile.
Ivikela amagama emikhiqizo, ngezigaba zabo by izimfanelo.
Olwandulelayo amasu methodological, wayevame ukuhlela didactic Ekwenza Umlingiswa game, kungaba lokhu okulandelayo:
Target kohambo oluya esitolo.
Xoxa nezingane mayelana nalokho ukuthenga ezitolo.
Okulolongwa kusuka izithelo zobumba nemifino.
Esebenzisa isihloko "Saya esitolo."
Ball umdlalo "Ezidliwayo-engenakudliwa ngobubi bawo."
Didactic ideskithophu bingo "Yini eyenza imikhiqizo."
Indima nokudlala isetshenziswa hhayi kuphela enkulisa futhi esikoleni samabanga aphansi. Ziyakwazi kuphumelela kakhulu ekutadisheni izilimi zakwamanye amazwe. Futhi Kudlalwe othisha ekilasini limnandi kakhulu ngisho abafundi basesikoleni esiphakeme - lifundisa intsha uthole khulula, ekuthuthukiseni amakhono ukukhuluma phambi kwezilaleli, amandla kulinganiselwa nokubuyekeza izimpendulo zabanye.
Futhi zonke umdlalo ozithandayo "Sea Wave", lapho lishona phambili ukubonisa izibalo ezahlukene kwembula yangempela oyibamba ithalente abadlali.
umsebenzi Creative - ekhonsathini
Ngokuvamile, amaqembu kufanele uchithe ku ekhonsathini yabo. Nokho, uma wonke amalungu omphakathi encane sazana futhi ukuthi ubani futhi yini okwazi. Kodwa uma iqembu namanje esemancane uma ivela izinsukwana wamandla, njengoba kwenzeka ekamu ehlobo ekuqaleni ushintsho? Khona-ke ukuhlela umsebenzi wokudala kuzosiza umdlalo "Daisy".
Udinga nje ukuphuma amakhadibhodi amacembe eziningi, bawendlala etafuleni noma silungise izinkinobho odongeni. On the ngemuva ngamunye kudingeka abhale umsebenzi: ukufunda izinkondlo, bacule, umdanso, ukudweba isilwane, xoxa indaba ezihlekisayo, nokunye. yena, izingane bazikhethele isigcebe sembali futhi ulungiselele inkulumo yakhe. Ezinye eqoqelwe ndawonye. Ikhono esikhundleni omunye umsebenzi omunye akufanele uvinjelwe, kusenzima mzamo lokudala, hhayi ukuhlolwa.
Into ehlukile kuwufanele lolu hlobo. Ngisho abantu abadala abazona zonke kungaba ezithakazelisayo ukukhuluma ngalokho abakubonayo, ikakhulu ngenxa okuthile. Kodwa ukuthuthukisa ithalente adingekayo zonke esemncane.
Izingane uzame ukubhala tindzaba, tinkondlo, eqanjiwe - kuhle! abadala Hlakaniphile ngokushesha ubhale phansi yonke indalo yabo. Futhi ake aphume izinyane engakhuli noma kamuva Bazhov Dragoon, Pushkin noma Christmas, isipiliyoni kuqala etemibhalo kuyoba memory elimnandi.
Kodwa isethulo amakhono aleso izincazelo kudingeka futhi ingane esikoleni futhi omdala esikhathini esizayo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba unake okukhethekile isethulo futhi retellings, kwakhiwa izindaba ezivela izithombe.
Inqubo ekuqondeni izwe okwenzeka ngaso sonke isikhathi, kusukela uzalwa uze uyoguga. Kuwo wonke yobudala it has nobukhulu bayo nesivinini yayo nokwenziwa entsha. Nokho, cishe Akupheli.
Lapha ingane liwela ayidabule iphepha, ubeka iminwe e wakhe amathoyizi umlomo. Lolu cwaningo kuwumsebenzi sina zokudala. Kid uthola okuningi nakho kanye nolwazi. Kodwa namanje kuncane kakhulu ukuba bafinyelele iziphetho aqondwa kwabanye.
Kamuva, lapho ingane ozoba umnikazi inkulumo kumele sithunyelwe yakhe kocwaningo track. Kusukela esemncane Izingane kufanele zikufunde nokumisa i-lwazi aluthola. Ahlotshiswe ifomu ebhaliwe noma eprintiwe, cwaningo kusengathiwa imisebenzi yesayensi.
I ucwaningo lokuqala ingane kungaba kwenziwe nge ama, obeka izinkomishi ne izitshalo efasiteleni. kokuma nsuku zonke kudingeka nizimisele ngaphansi kweso lomuntu omdala ngosizo okuqoshiwe noma izithombe. okufushane Ready sombiko - kuba ucwaningo langempela.
Ungahlela ucwaningo zokudala emkhakheni amasiko zobuciko. Ngokwesibonelo, i sihloko ezithakazelisayo kuyoba Ukuqhathaniswa izibalo nemihlobiso ku izitsha. Lapha uqala "Usosayensi" kuthatha ifa Luhlatiyo, izifundo ukuthola kunzima ngendlela elula futhi kulula - ku eziyinkimbinkimbi.
Izingane ezindadlana futhi sakhethwa ukuze ucwaningo nzima. Lokhu kuhlaziya kungaba imisebenzi yobuciko kanye zomculo, ucwaningo nge izakhi zamakhemikhali, ukuqoqwa kanye systematization izindlela zokunakekela for izitshalo kanye nezinye izinketho ezithakazelisayo.
Izici ezibaluleke kakhulu
Wonke umuntu engaba zokudala. Futhi umsebenzi othisha, abazali, othisha - ngosizo imisebenzi yokudala, izindaba collective ukusiza ekuvuleleni, emandla ekuchubeka ukuthuthukiswa osemusha ithalente.
Design kanye Ukucaciswa "Kia Sporteydzh" isizukulwane sokuqala
Imiphumela utshwala ngesikhathi kwenzeka lokhu inhliziyo. Imiphumela utshwala